Hello biggest blog ကိုလာလည်ကြကုန်သော biggest ၏ ကိုကို၊ မမ၊ ဦးဦး၊ ဒေါ်ဒေါ်၊ ဘကြီး၊ ဒေါ်ကြီး၊ အဖိုး၊ အဖွား၊ ယောကျာ်း၊ မိန်းမ အားလုံးကို ကျေးဇူးဥပကရ တင်ရှိပါသည်။ လာလည်သူအားလုံး မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ခါးညောင်း၊ မျက်စိညောင်း၊ အဲ အဲ မှားလို့ ပြည့်စုံပါစေ လို biggest က ဆုတောင်းထောပနာ ပြုလိုက်ပါတယ်။ မင်္ဂလာသက္ကရာဇ် ၁၃၀၀ ကျော် ( မသိလို့ဝါးချတာ ) တန်ဆောင်မုန်းလဆန်းရက်တစ်ရက်အချိန်ခါမှာ မင်္ဂလာဖြစ်သော Let It Be blog ကို လာလည်ကြသော မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသော အဲ အဲ ထပ်မှားပြန်ပြီ ကျက်သေ အော်မှားပြီးရင်မှားနေတယ် သူအားလုံးကျက်သရေ မင်္ဂလာ အဖြာဖြာ တိုးပွားပါစေလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်။ မတောက်တစ်ခေါက်မှုတ်လိုက်အုံးမယ် hello, how long, how are u? ။ ဤကနေ့ biggest ပြောချင်တကတော့ biggest ၏ တနေ့စာတာဝန်ကြီးများဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတာဝန်များက ရုံးပိတ်ရက်မှ အပ နေ့တိုင်း ထမ်းဆောင်ရပါတယ်။ ကဲ စပြီ . . .
☺☺☺ မနက်မိုးလင်း(ရ)နာရီမှမျက်လုံးတစ်စုံဖွင့်၍ရပါသည်။ (၅)မိနစ်၊(၁၀)မိနစ်လိုလည်းမပွင့်သေးပါ။ ဘယ်လိုလုပ်သိလည်းမမေးနဲ့ တဖက်ဖွင့်ပြီးကြည့်၍သိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
☺☺☺ (ရ)နာရီထိုးပြီ အနော်biggestအိပ်ရာထလာပါပြီ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာbiggest၏ ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးကလမ်းကြောင်း ရှင်းပေးပြီးဝေးဝေးရှောင်နေကြရပါသည်။ Why?အရှိန်မပြေသေးလို့ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာမျက်လုံးနှစ်လုံးကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ မျက်လုံးနှစ်လုံး လုံးဝပွင့်သွားအောင်မျက်နှာသစ်တဲ့နေရာဆီကို သွားသောကြောင့်ပါ။
☺☺☺ ထိုနောက်ပုံမှန်ဖြစ်သွားတဲ့အနော်biggest ပြုလုပ်စရာကိစ္စအဝဝကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။
☺☺☺ ထိုနောက်(၈)နာရီမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားတက်ရပါသည်။ သူပြိုင်ကိုယ်ပြိုင် အပြိုင်မှုတ်နေကြတဲ့အတန်းပေါ့။ မမှုတ်နိုင်တဲ့ biggestတစ်ယောက်ကတော့ ရေနွေးတစ်ခွက်ယူသွားတယ်။ သူများကိုမှုတ်ဖို့မဟုတ်ဖူး။ သူတို့အစားမောလို့ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် သောက်ဖို့ယူသွားတာ။ အမယ်လေး ဆရာကအရပ်ရှည်သလောက် လေကလည်းရှည်တယ်။ biggest တစ်ယောက်ရုံးကို (၁၀)နာရီလောက်မှရောက်တယ်။
☺☺☺ ကဲရုံးတော့ရောက်ပြီတွေသမျှလူကို ကရင်လို့၊ ထိုင်းလို့၊ ဗမာလို့၊ အင်္ဂလိပ်လို့၊ တရုတ်လို့၊ ကုလားလို့ တက်သလောက် မှတ်သလောက်နဲ့အချောင်း(၃၀)သောသွားများ(နှစ်ချောင်းက အခုမှငယ်သွားလဲလို့ကျိုးနေတယ်)နဲ့ အစွမ်းကုန်နှုတ်ဆက် ရပါတော့တယ်။
☺☺☺ ကဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသွားပြီ။ ထိုနောက်အတွင်းရော၊အပြင်ရောvirousရှိနေတဲ့အနော်၏ဖုန်အလူးလူးတက်နေသော ကွန်ပျုတာကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရပါသည်။ အပြင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးရင် အတွင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရပါသည်။
☺☺☺ ကဲကွန်ပျုတာအတွင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့အချိန် ကောင်ဖီတစ်ခွက်လောက်သောက်လိုက်ပါသည်။ ထိုနောက်သူများမုန့်ကို မျက်နှာချိုသွေးပြီး အားမနာတမ်း ပိုင်ရှင်ကိုမကြည့်ဘဲ(ကြည့်နေရင်မစားဖြစ်မှာစိုးလို့)ကော်ဖီနှင့်စားပါသည်။ စားရင်လည်းတခုနှင့် မကျေနပ်နိုင် နှစ်ခုစားရမှကျေနပ်ပါသည်။ မှုတ်ထားတာအားတော်တော်ကုန်ပြီး ဗိုက်စာနေ၍လည်းဖြစ်ပါသည်။
☺☺☺ ကဲဗိုက်လည်းပြည့်သွားပြီသန့်ရှင်းရေးတွေလည်းလုပ်ပြီးသွားချိန်မှာတော့ ကွန်ပျုတာရှေ့ထိုင်ပြီးမနားတမ်း ဝက်ဆိုဒ်တွေ၊ ဘလော့တွေ၊ သတင်းတွေ တက်ကြည့်ပါသည်။
☺☺☺ အီးမေးလ်တွေမနားတမ်းဖတ်၊ ခြေရာတွေမနားတမ်းရှာ၊ လက်တို့ပြီးမနားတမ်းသွားပြော၊ ဘာညာ သာရကာ နေကြာ ကွာစေ့ ဆိုပြီးစိမ်းလာသမျှလူတွေနဲ့လည်းchatရပါသည်။
☺☺☺ ဒီလိုနဲ့နေလည့်ရောက်ချိန်မှာတော့ ကိုယ်အတွင်းမှvirousများ၏အလိုအရ မစားချင်စားချင်နှင့်ထမင်းနှစ်ပန်းကန်လောက် သွားတီးလိုက်ပါသည်။
☺☺☺ နေ့လည်ပူအိုက်ချိန်ဆိုတော့ပန်ကာလေးကလည်းဖွင့် ထမင်းလေးကလည်းစားပြီးချိန်ဆိုတော့မျက်လုံးလေးကတစ်ဝက်ဘဲ ဖွင့်နိုင်တော့တယ်။
☺☺☺ အပြည့်ဖွင့်နိုင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစား၊စဉ်းစားအော်သိပြီသီချင်းနားထောင်မည်။ ဟစ်ဟော့၊ရပ်စ်၊ပန့်၊ဒန့်စ်၊အကုန် နားထောင်မတိုးတော့ဘူး တဝက်ရဲ့တဝက်ဘဲမျက်လုံးကဖွင့်နိုင်တော့တယ်။
☺☺☺ အဲဒါနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်တက်ရှာပြီးကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ ဥရောပ ရှိသမျှနိုင်ငံများရဲ့သရဲကားတွေကို ထိုင်ကြည့်ရပါတော့တယ်။
☺☺☺ ရှည်လျှားလှတဲ့သရဲကားတွေကို ဇာတ်ကောင်သရဲနေရာဘဲကြည့်တယ် ကျန်တဲ့လူတွေရဲ့အခန်းတွေမကြည့်ဘူး။ Line connection မကောင်းလို့။ သရဲကြည့်ချင်လို့သရဲကားကြည့်တာလေ။ လူကားကြည့်ချင်မှတော့ Druma ကားဘဲ ကြည့်တော့မှာပေါ့။
☺☺☺ သရဲကားကြည့်ပြီးအညောင်းညာပြေခေါင်းကြည့်အောင် ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ထပ်သောက်ပါ၏။ ထိုနောက်ဟိုရောင်ရောင် ဒီရောင်ရောင်ဟိုကလစ်ဒီကလစ်လုပ်ပြီး အလုပ်များချင်ယောင်ဆောင်ရပါသည်။
☺☺☺ တခါတရံ casino world ထဲဝင်ပြီးဥာဏ်သွားစမ်းပါသည်။
☺☺☺ အော် အလုပ်များနေတာနဲ့နာရီတောင်မကြည့်မိဘူး။ (၅)နာရီရှိနေပြီဘဲ။ နောက်ကျနေပြီအိမ်ပြန်တော့မှ . . .
☺☺☺ အိမ်ရောက်မှအမှန်အကန်အလုပ်ရှုတ်ပါသည်။ မညာပါဘူးတကယ်ပြောတာပါ။ အနော်biggestကိုပိန်သွားအောင်လို့ စက်ပါးစပ်နှင့်ကျေးဇူးရှင်မိနှင့်ဖက မနားတမ်းကိုမောင်းပါသည်။
☺☺☺ အော် (၈)နာရီထိုးလို့ထိုးသွားမှန်းတောင်မသိဘူး။ ညစာစားဖို့ပြင်ရဆင်ရစားရသောက်ရနဲ့(၉)နာရီခွဲသွားမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး။ အော်အချိန်ကလည်းကုန်မြန်လိုက်တာ။ နောက်ဆုံးသတင်းလေး ဖြစ်တဲ့ VOA လောက်ဘဲ နားထောင်ရတော့တယ်။ ထိုနောက် မျက်လုံးကမှိတ်သွားပါတော့သည်။
The End. . . . . . .
Labels: တစ်နေ့တာ တာဝန်
ဆီဗုံးပျောက်နေလို. ဒီမှာအော်သွားတယ် biggest လေး။ တော်တော် အလုပ်ရှုပ်တာပဲ။ ဟဲဟဲ နားချိန်တောင် မရပါလားနော်။
အားးးးးးးး မရောက်တာကြာလို့ လာလည်တာ သူကကြောင်နဲ့ စောင့်နေတယ်။ကြောင်ကိုတော့ပိတ်မကန်သွားပါဘူး/